ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ အသီးအပွင့်များ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ, shared information. Bookmark the permalink.
← Even if …
ခေတ်မီလိုက်ရင် ကောင်းမလား! →
3 thoughts on “ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ အသီးအပွင့်များ”
Boyz | June 23, 2009 at 11:45 am
ဟိုအရင်ခေါက်တွေကတော့ ရေပိုင်နက်ထဲမှာ မုန်တိုင်းမိလို့ လူသားချင်း စာနာ ထောက်တားတဲ့ အနေနဲ့ ကမ်းကပ်ခွင့်ပေးတာပါ။ ဘာတွေ တစ်လွဲတွေးနေလဲ မသိဘူး။ အခုလဲ မုန်တိုင်း မိလောက်တဲ့ အခြေ ရှိတယ်ဗျ။ ရာသီဥတုက ဆိုးတာကိုး…။
MrDBA | June 24, 2009 at 3:55 pm
ကဘွိုံက်က ဒီတော့ မှန်မှန်ရောက်တယ်ဟ။ ငါ့ဆီကျမလာဘူး။ ကလောက်။
ကုမ်ရာသီသူ | June 24, 2009 at 5:49 pm
ကဘွိုက်>> ဟုတ်ပါ့။ လူတွေကလည်း လိုရာဆွဲတွေးကြတော့တာပဲ။ (အမ်- ရေးလိုက်မိတာတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုပဲနော်) 😛
Bro. DB>> ကဘွိုက်က ကိုကြီးဒီဘီ ဖျားနေလို့ တိတ်တိတ်ပြန်သွားတာလားမှ မသိ။ H1N1 ကူးမှာစိုးလို့။ ဟိ 😛